Date My Pet » 6 Mibvunzo Key kuzvibvunza Usati Kubatikana ari Dating Pool
6 Mibvunzo Key kuzvibvunza Usati Kubatikana ari Dating Pool
Last updated: Nov. 27 2020 | 3 Maminitsi verenga
Fungidzira kuenda ndibhadhare mari muchitoro kuti purogiramu zvitoro rwendo. Ukaregeredza kuti kubva pasi zvinhu zvaunofanira, bhajeti, kana kunyange zvoupfu pfungwa.
The zvokusarudza vari pfungwa boggling. Hamuzivi kupi kutanga kutarisa. Hauna hurongwa ... .no nzira kuti kupenga kwako.
Iva nechokwadi kuti uchaita kutambisa nguva, kukanganwa kuti atore zvimwe zvinodiwa zvikuru "Nehunde kumusoro" zvinhu, overspend, uye vanopedzisira kuita rwendo rwechipiri mwedzi pamberi pamusoro.
Kumwe pfungwa nyonganyonga uye nokuvhiringidzika Panova kana tiri "pamusika" wokuroorana naye.
Vazhinji vedu hatina pfungwa chaiyo zvatiri kutsvaga, apo kutarisa, kana kuti tisvike kuita kuudzwa sarudzo.
asi, haina kuva nzira.
SaSocrates kamwe nokuchenjera akataura: "The unexamined upenyu hakuna kukodzera kurarama."
With ichi sezvo nhungamiro yedu, heano 6 Mibvunzo inokosha unofanira kuzvibvunza vasati vatanga kuti-zvinokosha zvose kutanga musi.
1. Chii dzangu iyezvino kufambidzana chinangwa? Ndiri kutsvaga wauchazoroorana naye? Okurerutsa kufambidzana? An rakavhurika ukama? A shuga baba? The zvakajeka muri, nani uchazonakidzwa kukurukura izvi zvinogona mudiwa, uye naka zvichava kwavari. Kunyange kana usingabvumirani nekutaura kwavari, rinogona kukubatsira kuponesa nguva uye nenyonganyonga iri kwokutanga kuongorora kwacho. Funga nzira!
2. Ndezvipi dhiri wangu namapoporodzi? Nemamwe mashoko, chii maitiro, miitiro, kana mararamiro nyaya uri kuda kutyora. Semuyenzaniso, vamwe varume havazodyari musi vakadzi nevana. Vamwe vakadzi havazodyari musi vakomana vane mhosva chinyorwa. Uye vamwe, zera kungava chinhu zvinonakisa mukana wokuti vanhu vanga. Kunyange kubvuma kunokosha vanobudirira ukama zvose, hatifaniri zvinopesana yedu chinoumba tsika kana musimboti ani tiri, chete kuti kubatana naye ane söpöläinen.
3. Chii Handina kudzidza kubva ukama hwangu wokupedzisira? Pane chokwadi zvikuru okuti, "Vaya vanotadza kudzidza kubva kare vakananga kudzokorora izvozvo." Zvichida maitikiro azvakaita zvino vanoziva kuti "thugs" hamuzi chinhu chako. Kana kuti unofanira kukurukura nani zvaunoda. Zvidzidzo zvinosiyana nerimwe rudo "mudzidzi." Chinangwa chaicho nderokuziva chero anoparadza kana disserving kufambidzana avaiita kudzivisa kudzokorora. Get pfungwa pano?
4. Ko kutsvaka wangu hunodzorwa sezvazviri? Kuva yokuwachira mazita yakakwirira zvaunofarira chete kuvhiringa uye achawedzera muitiro. Semuyenzaniso, vamwe vakadzi kuvimbisa kuwana munhu wokuroorana naye mafiti matanhatu, kuita nenhamba nhanhatu, asina akaroora, anotaura 3 mitauro, uye anoda dzinovaraidza. Zvinoita? chokwadi.
Zvimwe? About sezvo zvikuru sezvo ini vachiroora Celebrity yangu apwanye, Keanu Reeves. Get chinotiudza.
5. Ndiyo nguva yakanakisisa kuwana tsoka dzangu dzanyorova? Ndiri kutsvaka rebound kutsiva aimbova ukama? Ndine nguva uye simba kuti uparadze pakuva wakaenzana naye muukama? Handina akaporeswa kubva maronda kare? Izvi zvinhu zvinokosha zvokufunga nezvazvo. Uye chete munoziva chaiyo ngaakuitirei.
6. Chii mutambo wangu urongwa? Ndichaitei kusaina nokuda paIndaneti kufambidzana basa? Bvunza shamwari dzangu kugadzira kundimedza? Wagadzirwa wenguvo rangu "zuva?"Ko Ndinofanira kuderedza uremu? Ndichaita kufambidzana kaviri pavhiki kana kaviri pamwedzi? Sezvo nezvinangwa zvose zvakakomba, mutambo hurongwa anofanira kuva nzvimbo rive kambasi, tirambe akaita, uye tirambe tiri munzira.
"To kwako nokuzvidzora ndezvechokwadi." Kana uchida kuwedzera vakarimirana yokuwana rworudyi mumwe uye nokusika zvikuru enderana ukama, kuziva pachako kutanga.
Chii Twitter vanogona kukudzidzisa About Love?
Kupfeka Nokuti A Date First